binary Gambit ထရေးဒင်းသတင်းများ | အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
လူတိုင်းသည်အာမခံအမြတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်မှ "ရွှေသော့" ကိုရှာဖွေလိုသည်။
ဒါဟာအန္တရာယ်များကို minimize လုပ်နှငျ့သငျအရေးကြီးသောစီးပွားရေးသတင်းကို အသုံးပြု. ကောင်းသောငွေရှာဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အိုလံပစ် TRADE ကိုအကြံပြုချက်များ
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ, သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းအရောင်းအ cancel ရန်သင့်အားဖွသေချာရပေမည်။ မရတိုင်းပွဲစားထောက်ခံမှုဒီ feature, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဥပမာအဖြစ် OLYMPTRADE ပွဲစားကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဒီပွဲစားနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်သင်စျေးနှုန်းမှားဦးတည်ရွေ့လျားကြောင်းမြင်သောအခါမဆိုဖွင့်လှစ်ကုန်သွယ်ရေး, cancel နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပြီး, ယခုတွင်ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်သင်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
တစ်ပတ်ကို 6-7 အကြောင်းကို - ဟုတ်ပါတယ်, အန္တရာယ်မရှိဘဲသင်ငွေရှာနိုင်သောအများကြီးသတင်းမရှိ။
သငျသညျအခြို့သောဝင်ငွေကို generate ရန်အဘို့အသို့ရာတွင်ထိုသို့အလုံအလောက်ရှိလိမ့်မည်။
အဆင့် 1 ။ စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်တွင်အရေးအပါဆုံးသတင်းကိုရှာပါ။ ဤရွေ့ကားသတင်းသုံးခုသောနွားထီးတကောင်အကြီးအကဲများနှင့်အတူမှတ်သားနေကြသည်။
အဆင့်2။ (သတင်းဂျာမဏီကနေလာမယ်ဆိုရင်ဥပမာ, ငွေကြေး EUR ဖြစ်မည်, ကျနော်တို့ EURUSD ကိုရှေးခယျြ) ကသတင်းအနေဖြင့်ငွေကြေးနှင့်အတူငွေကြေးတစ်စုံကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆင့်3။ တဦးတည်း "UP" ကုန်သွယ်ရေးနှင့်တဦးတည်း "ချ" ကုန်သွယ်ရေး: သတင်းမတိုင်မီတစ်မိနစ် 10 မိနစ်ကာလအဘို့ဖြန့်ချိ, ပွင့်လင်းနှစ်ခုအရောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်4။ 2-3 မိနစ်အကြာကစျေးနှုန်းရွေ့လျားသောလမ်းသိသာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်ဆုံးရှုံးကုန်သွယ်မှုကိုပယ်ဖျက်သင့်ပါတယ်အခါပါပဲ။ ခလုတ်ကို "Cancel", သင်ပြန်သင့်ရဲ့ကစားပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအရလိမ့်မယ်နှိပ်ပါ။ မှတ်ချက်, အစောပိုငျးကသင်ကုန်သွယ်ရေး, သငျသညျကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ပိုပိုက်ဆံ cancel ပါလိမ့်မယ်။
အဆင့်5။ အခြားကုန်သွယ်မှုကုန်ဆုံးသည်အထိစောင့်ဆိုင်းနှင့်သင့်အမြတ်အစွန်းယူပါ!
ငါတို့သည်ငါတို့၏ထို့နောက်တိုင်းကုန်သွယ်မှု 1000 ရူဘယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုလျှင် investments ဖြစ်ရလိမ့်မည်: 10002= 2000 ရူဘယ် x ။
အဆိုပါဆုံးရှုံးကုန်သွယ်မှု၏ဖျက်သိမ်းခြင်းထံမှ payback 40% ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ (400 ရူဘယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှုံးများမှာ) ကျော 600 ရူဘယ်ရလိမ့်မယ်။
ဒုတိယကုန်သွယ်မှုများအတွက်အသားတင်အမြတ် 80% ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ 800 ရူဘယ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
စုစုပေါင်း: 800 - 600 = 200 ရူဘယ်။
အများကြီးအန္တရာယ်ယူပြီးမပါဘဲ, သငျသညျ 200 မိနစ် 10 ရူဘယ်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအသီးအသီးကုန်သွယ်မှုအတွက် $ 200 အများဆုံးပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားလျှင်, သင်ရုံမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း $ 40 ရပါလိမ့်မယ်။
ဤနည်းဗျူဟာဂျပန် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY), USA သို့ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY), နှင့်ကနေဒါ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ / အင်္ဂလန် (ပေါင် / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ရက်နေ့တွင်သတင်းနှင့်အတူအသုံးပြုသင့် CAD) ။ ဒါ့အပြင်သင်ယူရိုဇုန် (EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အပေါ်အရေးအပါဆုံးသတင်းသုံးနိုင်သည်။
သို့သော်ဤအမှု၌, သင်ကအရမ်းသတိထားသင့်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ်သတင်းထွက်သည် Watch ။ မဆိုရှိလြှငျ, စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုခန့်မှန်းရခက်ပါလိမ့်မယ်။
Futures, စတော့ရှယ်ယာနဲ့ options ကုန်သွယ်ဆုံးရှုံးမှုအများအပြားစွန့်စားမှုကပါဝင်ပတ်သက်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်သင့်လျော်သောမဟုတ်ဘူး။ အနာဂတ်, စတော့ရှယ်ယာနဲ့ options ၏အဘိုးပြတ်အတက်အကျစေခြင်းငှါ, တစ်ဦးရလဒ်အဖြစ်, clients များဟာသူတို့ရဲ့မူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက်ပိုမိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ ရာသီအလိုက်နှင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များ၏သက်ရောက်မှုပြီးသားစျေးကွက်စျေးနှုန်းများနှင့်စတော့ရှယ်ယာသို့ factored ဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်ကုန်သွယ်၏မြင့်မားသြဇာသဘောသဘာဝသေးငယ်တဲ့စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်ပေါ်မှာအကြီးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်, ဒီသင်တို့တဘက်၌အလုပ်လုပ်နိုင်, ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုမှဦးဆောင်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်မှဦးဆောင်သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်နိုင်သောဆိုလိုသည်။
စျေးကွက်သင်တို့တဘက်၌လှုံ့ဆျောပေးလျှင်သင်သည်သင့်အကောင့်သို့အပ်နှံငွေပမာဏထက် သာ. ကြီးမြတ်စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုရေရှည်တည်တံ့စေနိုင်သည်။ သငျသညျသင်အသုံးပြုအားလုံးအန္တရာယ်များနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များကိုအဘို့နှင့်ရွေးချယ်သောကုန်သွယ်မှုစနစ်တာဝန်ရှိသည်။
Tags: အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကြောင်းကို, binary Gambit, ဒွိ gambit မဟာဗျူဟာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဘယ်လောက်သေချာဖြစ်ပါသည်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးငွေသွင်းဖို့ဘယ်လို, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးရဲ့ login, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုနိမ့်ဆုံးသိုက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအွန်လိုင်း app ကို, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုလှည့်ကွက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဘာလဲ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှု binary သောသူသည်